Njengoba sekuzoqala-Inthanethi ekubeni developers wacabanga yini ukuthi ungadlulisa phakathi kwamakhompyutha ezihlukahlukene ulwazi ngendlela yokuthi kungashiwo ngempela ngokwanele azibonayo iyiphi yesikhulumi. Into wukuthi uma inethiwekhi ukuze uthumele amafayela wadala kunoma yiziphi izinhlelo lokuthi ngokomthetho kungenzeka, ngeke baze bakwazi ukuwenza wonke amakhompyutha angaveli kahle ngoba amakhompyutha akwinethiwekhi ungaba ezisekelweni ezahlukene kanye amasethi ezahlukene izinhlelo efakiwe.
Isixazululo etholakele. Amafayela Text ingaboniswa kuwo wonke amapulatifomu. Ngakho-ke, lonke ulwazi, kwanqunywa ukuba ulithumele amafayela umbhalo. Kodwa kuthiwani izithombe nombhalo ukufomatha?
Kuze kube yimanje, bakhula yolimi meta okhethekileyo, obizwa ngokuthi ulimi Standard generalized yomdwebo, noma SGML esifushanisiwe - Standard yomdwebo ulimi generalized. Imibono yaleli ulimi wukuthi kuwebhu udluliselwa umbhalo, uphawule nge tags ekhethekile - tags okuyinto unikeze ithimba isimiso esikhethekile isiphequluli ukubonisa umbhalo ncamashi njengoba kuhlosiwe.
A ozalweni SGML kwaba i-HTML uxhumano yomdwebo ulimi (lwemibhalo yewebhu Languale), ngofuzo imibono lomzali yayo. Tags, uhlu okuyinto zonke umphathi wewebhusayithi eyaziwa, tshela isiphequluli hhayi kuphela indlela ofuna ukubonisa umbhalo, kodwa futhi kunoma iyiphi indawo ukufaka yesithombe ukuthi is ngobulili eceleni, indlela ukuhlobisa itafula, ungawenza kanjani ulwazi le-computer, nokuningi.
Nokho, ukubonisa kolwazi akuhlanganisi kuphela -HTML ithegi hlu ngempela ebanzi, kodwa nobunye ubuchwepheshe. Ngakho-ke ngokweBhayibheli, uvele hhayi kudala, imibono ngokuhlukana uxhumano yomdwebo nombhalo ukufometha konke ukufometha waqala ukwenza ifayela ezingefani ezibizwa ngokuthi Cascading amashidi (noma amathebula) Izitayela - Cascading Style Sheets (CSS), futhi kuwo wonke amakhasi HTML ukuxhuma ifayela CSS, okuyinto lula kakhulu umsebenzi hhayi kuphela ukufometha umbhalo kodwa ukudalwa ezihlukahlukene umklamo khasi lewebhu.
Ngakho uhlu tags, okuyizinto namanje enganele ukudala amakhasi ewebhu izakhi ashukumisayo, asikwazi ukusetshenziswa ukudala inkinobho enhle ashukumisayo olushintsha isithombe sangemuva ku sokuhambisa phezulu. Ngakho namanje kanjani ukwenza inkinobho isayithi, nge amahle ashukumisayo? Nalapha futhi, iza ukusiza CSS ubuchwepheshe. Tags hlu ukuthuthukiswa kolimi kungashintshwa, ukhombise isiphequluli lapho likhona inkinobho, futhi izakhi CSS ukukhombisa isizinda (noma ilebula) lizokwabelwa inkinobho abasezikhundleni ezahlukene of isikhombisi segundane.
Ngakho tags ngemuva Yiqiniso, ungabonisa, kodwa ubuchwepheshe yesimanje sokuhlukanisa ukunqunywa nasekubulaleni lo msebenzi Amakhasi ewebhu unikele CSS. HTML ngokuqhubekayo ngcono. Manje onjiniyela amiselwe version wesihlanu ulimi, okusekelwa yesimanje brauzerov.V inguqulo entsha kakhulu ulimi eziningi, enikeza Onjiniyela ububanzi Amazing wobuciko.
Ubungcono nazo CSS ubuchwepheshe. In the version wesithathu kukhona izinto eziningi ezintsha, ezifana ifreyimu ajikelezayo. Ezinguqulweni ngaphambili, 'ukwenza "enjalo uhlaka, kwakudingekile ukuba abeke isakhiwo tabular izakhi ngabanye ingcaca ozimele ezinjalo.
Lena - ubuchwepheshe banamuhla. Yini eyokwenzeka kusasa?
Agglutination kwesidoda - imbangela ukungabi nenzalo wesilisa?